ဦးစံရှားနှင့် ပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Other - Non Channelized » ဦးစံရှားနှင့် ပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့်
Posted by ဂျဲသု on Sep 2, 2011 in Other - Non Channelized | 27 comments
မှော်ဆရာရဲ့ကျေးဇူးနဲ့ လူရိုင်းရွာက လွတ်လာတဲ့ဦးစံရှားဟာ Foreign Resident ညွှန်တဲ့ လမ်းအတိုင်း weiwei နဲ့ TTCG တို.ဆောင်းပေးလိုက်တဲ့ ဦးထုပ်ဖြူ ကြီးဆောင်းပြီးminthakhin ကျေးဇူးကြောင့်ရလာတဲ့ ရွှေဒင်္ဂါး ခုနစ်ပြားပိုက်ကာ ခရီးထွက်လာပါပြီ။လက်ထဲမှာလည်း Myanmar ပေးလိုက်တဲ့ ကြက်ဥပြုတ်ကြီးကိုင်လို.ပေါ့။ ဒါနဲ. ဦးစံရှားဟာ ရွာတစ်ရွာကိုရောက်သွားပါတယ်။ အဲဒီရွာမှာ ဥာဏ်စမ်းအဟေဠိ ပြိုင်ပွဲရှိပါတယ်။ အဲဒီပြိုင်ပွဲကို ဦးစံရှား ၀င်ရောက်ဆင်နွဲချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီပြိုင်ပွဲကို ၀င်ပြိုင်ခွင့်ရဖို.အတွက်က ဥာဏ်ရည်စစ်ဆေးမှုခံယူရဦးမှာပါ။ဥာဏ်ရည်စစ်တဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကို ဖြေနိုင်မှ ပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့်ရမှာပါ။ ဦးစံရှား ဖြေရမယ့်မေးခွန်းကတော့………
ဦးစံရှားကို အလေးချိန်တူ ပုံစံတူ သံဂေါ်လီ ၁၁ ပြထားပါတယ်။ နောက် ရွှေဂေါ်လီတစ်လုံး ၊ ငွေဂေါ်လီတစ်လုံးလည်းရှိပါသေးတယ်။အဲဒီရွှေဂေါ်လီနဲ့ငွေဂေါ်လီကိုလည်း သံဂေါ်လီတွေနဲ.ပုံစံတူ အရောင်တူ လုပ်ထားပါတယ်။ ရွှေဂေါ်လီကတော့ သံဂေါ်လီတွေထက်နည်းနည်းပိုပြီး အလေးချိန်စီးပါတယ်။ ငွေဂေါ်လီကတော့ သံဂေါ်လီတွေထက် နည်းနည်းလေး ပေါ့ပါတယ်၊၊ နောက် အဲဒီ သံဂေါ်လီ ၁၁ လုံးထဲကို ဂေါ်လီတစ်လုံးရောထည့်လိုက်ပါတယ်။ရောထည့်လိုက်တဲ့ဂေါ်လီဟာ ရွှေဂေါ်လီလည်းဖြစ်နိုင်သလို ငွေဂေါ်လီလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ နှစ်မျိုးထဲကတစ်မျိုးမျိုးပေါ့။ နောက်ဦးစံရှားကို ချိန်ခွင်တစ်ခုပေးလိုက်ပါတယ်။ဦးစံရှားလုပ်ရမှာက အဲဒီချိန်ခွင်ကို သုံးကြိမ် အသုံးပြုပြီး ရောထားတဲ့ဂေါ်လီကို ရှာပေးရမှာပါ။ရှာပေးရုံတင်မကပါဘူး။ ရွှေဂေါ်လီလား သံဂေါ်လီလားဆိုတာပါ ခွဲခြားပေးရမှာပါ။ သတိချပ်စရာကတော့ ချိန်ခွင်ကို သုံးကြိမ်ပဲ အသုံးပြုခွင့်ရှိတယ် ဆိုတာပါပဲ။ ဦးစံရှားကို ပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့်ရအောင် ကူညီကြပါဦး။
ပထမအကြိမ် – တဖက် ၅လုံးစီခွဲချိန်၊ အလေးညီလျင် ဖယ်ထားတဲ့၂လုံးနဲ့ အပြင်ဖက်က ကျန်၁လုံး တို့ကို ချိန်ဆကြည့် အဖြေထွက်သည်၊ မညီလျင် (ဖယ်ထားသော၂လုံးကို ထည့်စဉ်းစားစရာမလိုတော့)
ဒုတိယအကြိမ် – ပိုလေးတဲ့ဖက်ကို ယူပြီး ၂လုံးစီထပ်ခွဲချိန်၊ ညီလျင် အဖြေထွက်ပြီ။ မညီလျင်လည်း တတိယအကြိမ် – အလေးသာသော ၂လုံးကို တဖက်စီခွဲချိန်ပြီး သံနှင့် သတ္ထုခွဲနိုင်သည်။
လေးတာ ရွှေ၊ အခြားသည် သံ၊ အပြင်ဖက်အလုံးသည် ငွေ။ ဒါမှမဟုတ် ပေါ့တာ ငွေ၊ အခြားအလုံးသည် သံ၊ ကျန်အလုံးသည် ရွှေ။
နေအုံးဗျ မမှန်သေးဘူး။ နက်ဖြန်ကြမှ ပြောတော့မယ်ဗျာ။ ဂွတ်နိုက်..။
ဟုတ် ဒီမှာတော့ နေ.ခင်းကြီးဗျ
ဒီ ပုစ္ဆာနဲ့ လူသတ်စင်ပုစ္ဆာဟာ ၁၉၈၂ ခုနှစ်လောက်က ထွက်ခဲ့တဲ့ ဥပဒေဂျာနယ်ထဲမှာပါတဲ့ပုစ္ဆာတွေပါ။ ကျွန်တော့်အဖေ ဥပဒေတက္ကသိုလ် တက်ရင်းဖတ်ခဲ့ရတဲ့ ပုစ္ဆာလေးတွေပါ။ ကျွန်တော်တို. ရှစ်တန်းနှစ်လောက်က ဖေဖေ က ကျွန်တော်တို.ညီအစ်ကိုတစ်တွေကို မေးခဲ့တဲ့မေးခွန်းလေးတွေပါ။လူသတ်စင်ပုစ္ဆာတော့ ကျွန်တော် မဖြေနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒီပုစ္ဆာကိုတော့ ဖြေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ရတဲ့ အဖြေနဲ.ကျွန်တော့် ဖေဖေ ပြောတဲ့အဖြေကလည်းမတူပါဘူး။သားအဖနှစ်ယောက်အတော်လေးငြင်းခုန်ပြီးမှ အဖြေနှစ်ခုလုံးဟာ သူ.နည်းသူ.ဟန်နဲ့ သူ မှန်နေတယ်ဆိုတာ လက်ခံလိုက်ရပါတယ်။ စေ့စေ့စပ်စပ်လေးစဉ်းစားကြည့်ပြီး အဖြေရလာခဲ့ရင် ခံစားရတဲ့ကြည်နူးမှုက ဘာနဲ့မှမတူပါဘူး။
ဦးစံရှားကိုမြင်တော့ အရမ်းကူညီချင်ပါတယ် …
ဒီတစ်ခါ နဲနဲများပိုခက်သလားလို့ …
၃ လုံးစီ ယူပြီးချိန်မယ် … နှစ်ဖက် မညီရင် အဲဒီ ၆ လုံးထဲက တစ်လုံးက ရွှေသို့မဟုတ် ငွေ
နှစ်ဖက်ညီနေရင် မချိန်ထားတဲ့ ၆ လုံးထဲကတစ်လုံးက ရွှေသို့မဟုတ်ငွေ ….
သံမှန်းသိပြီးသား ၃ လုံးနဲ့ မသိသေးတဲ့ ၃ လုံးချိန်မယ် …
တစ်ဖက်က လေး (သို့မဟုတ်) ပေါ့ရင် အဲဒီသုံးလုံးထဲက တစ်လုံးက လေးရင် ရွှေ ပေါ့ရင် ငွေ
တူနေရင် မချိန်ရသေးတဲ့ ၃ လုံးထဲက ရွှေသို့မဟုတ် ငွေ …
ရွှေသို့ဟုတ်ငွေမှန်းသိပြီးသား ၃ လုံးထဲက ၂ လုံးယူပြီး ချိန်ခွင်ထဲကို တစ်လုံးစီထည့်မယ် …
ညီနေရင် …. မချိန်ပဲကျန်နေတာက သေချာပြီပေါ့ …
မညီရင်လဲ ဘယ်ဟာက ရွှေ (သို့မဟုတ်) ငွေလဲ ဆိုတာ ချိန်ခွင်လျှာကိုကြည့်ပြီး ပြောပြနိုင်တယ် ….
ဒါပေမယ့် ရွှေလားငွေသားမသိတဲ့ မချိန်ရသေးတဲ့ ၃ လုံးထဲကဆိုရင်တော့ ဒုက္ခရောက်ပြီ …
ဦးနှောက်ခြောက်ပြီ .. မစဉ်းစားတတ်တော့ဘူး …
ညဘက်အထိ အဖြေမတွေ့တော့မှ ထပ်စဉ်းစားတော့မယ် …. အခုတော့ နားပြီ ….
၆ လုံးစီနှစ်ဖက်ခွဲချိန်၊ ပြီးရင် ပေါ့၊လေး (ပေါ့လား၊လေးလားမှတ်သားထားရန်) နေတဲ့အခြမ်းဘက်က
၂ လုံးကိုချန်ထားပြီး ကျန် ၄ လုံးကို နှစ်ဖက်ခွဲချိန်
တူနေလျှင် စောစောကချန်ထားတဲ့ ၂လုံးကို ၁လုံး ၁ ဖက်ဆီပြန်ချိန် (ဒီမှာအရေးကြီးတာက အထက်မှာပေါ့လား၊လေးလားမှတ်ထားတာကိုပြန်သတိရဖို့ ပါ။)
အဲဒီမှာ အထက်ကလေးခဲ့ရင် ပိုလေးတာကိုညွှန်ပြတဲ့ ၁လုံးက ရွှေပါ။ ပေါ့တာကိုညွှန်ပြခဲ့ရင် ငွေပါ။
၄လုံးကိုနှစ်ဖက်ခွဲချိန်ခဲ့လို့မတူဘူးဆိုခဲ့ရင် ပေါ့နေ၊လေးနေတဲ့ အခြမ်းက နှစ်လုံးကို အပေါ်ကပြောခဲ့သလိုချိန်ပါ။
ရွှေသို.မဟုတ်ငွေက တစ်လုံးပဲပါမှာပါ ။ နှစ်လုံး စလုံးကို ရောထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ ရောထားတဲ့တစ်လုံးက ရွှေဖြစ်နိုင်သလိုငွေလည်းဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ တဖက်က ပေါ့ တစ်ဖက်ကလေးဆိုတဲ့ပြသနာမှာ လေးတာက ရွှေပါလို.လေးတာဖြစ်နိုင်သလို. တခြားတဖက်မှာငွေရှိနေလို. ပုံမှန်သံဂေါ်လီတွေက လေးသွားသလိုဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ သေသေချာချာလေးစဉ်းစားကြည့်ပါဦး။
if they r equal?
၁ အချက်မှာတင် တစ်ဖက်က ပေါ့ တစ်ဖက်ကလေးနေတာလေ။လေးနေတဲ့ ၆လုံးကို ရွှေပါတယ်လို. သတ်မှတ်လို.မရပါဘူး။ ကျန်တဲ့ ဘက်က ငွေဖြစ်နေလို.ပေါ့နေတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ပုံစံတူဂေါ်လီ ၁၂ လုံးထဲမှာ ၁လုံးကပဲထူးခြားနေတာပါ။ ထူးခြားမှုဟာ ရွှေဖြစ်ပြီးလေးခြင်းအားဖြင့်ထူးခြားနေနိုင်သလို ငွေဖြစ်ပြီးပေါ့ ခြင်းအားဖြင့်လည်းထူးခြားနေနိုင်ပါတယ်။ ရောပါနေတဲ့ တစ်လုံးဟာ ကျန်တဲ့ ၁၁ လုံးထက်လေးနေတာဖြစ်နိုင်သလို ပေါ့နေတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်
ဘယ်ဟာကလေးတယ်ပေါ့တယ်ဆိုတာသိရပါလိမ့်မယ်။ ပထမ ၃လုံးစီ သို့မဟုတ် ဒုတိယ၃လုံးချိန် တာညီတာ၁ကြိမ်တွေ့ပါမယ်။ အဲဒီကမှ အလေးချိန်မတူတဲ့ ၃လုံးကို ယူပြီး ၁ဖက် ၁လုံးစီ ထည့်ချိန်ပါ။
လေးစားပါတယ် xman ခင်ဗျားလည်းမှော်ဆရာပြောသလို အိုဗာတင်းတွေသောက်ထားတယ်ထင်တယ်နော်။ ခင်ဗျားခုပြောတဲ့အဖြေက ကျွန်တော့်ဖေဖေ ရှာတွေ.ခဲ့တဲ့နည်းပါပဲ။
ဒီအဖြေက မမှန်သေးဘူးလို့ ကျွန်တော်တို့ထင်တာပဲ… ကို nature ရှင်းပြထားတာ မပြည့်စုံတာလည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်… သူသေချာရှင်းပြမယ်လို့ မျှော်လင့်ရတာပဲ
တဖက်ကို သုံးလုံးစီ ချိန်ကြည့်လို. အလေးချိန်မတူ ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ အဲဒီခြောက်လုံးထဲက ထူးခြားမှုရှိနေတဲ့အလုံးကို ဘယ်လိုရှာမလဲ။
လေးလုံးစီ သုံးစုခွဲမယ် ။ ပြောလို့လွယ်အောင် အမည်ပေးထားမယ်။
(က)အုပ်စု၊ (ခ) အုပ်စု၊ (ဂ)အုပ်စု ဆိုပြီးပေါ့။ အမှတ်အသားပါလုပ်ထားမယ်။
(က)၄လုံးနဲ့ (ခ)လေးလုံးကို ချိန်ခွင်တဖက်စီမှာထည့်လိုက်မယ်။ အခြေအနေ၂မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်။
ချိန်ခွင်၂ဖက်လုံးညီနေရင် ရွှေ သို့မဟုတ်ငွေ ဂေါ်လီဟာ (ဂ)အုပ်စုထဲမှာ။(က)နဲ့(ခ)အုပ်စုများက သံများပဲဖြစ်သွားပြီ။ ဒီတော့-
ဒုတိယအကြိမ်= (ဂ)အုပ်စုထဲက ၃လုံးကိုချိန်ခွင်တဖက်မှာထည့်-(က)အုပ်စုထဲက၃လုံးကို အခြားဖက်မှာထည့်မယ်။အခြအနေ ၂ မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်။
ညီနေရင် (ဂ)အုပ်စုထဲက ကျန်တဲ့ ၁လုံးဟာ ရွှေသို့မဟုတ်ငွေ။ အခြားဂေါ်လီအားလုံးသံ။ နောက်တကြိမ်မှာ အဲဒီအလုံးကို တဖက်မှာထည့် ၊ သံတလုံးကိုတဖက်မှာထည့်ကြည့်။ပေါ့ရင်ငွေ လေးရင်ရွှေ။
မညီရင် -ချိန်ခွင်ပေါ်က (ဂ)အုပ်စု၃လုံးမှာ သံမဟုတ်တာ ပါသွားပြီ။ (ဂ)အုပ်စု၃လုံးကလေးနေရင်ပါသွားတာရွှေ၊ ပေါ့နေရင်ပါသွားတာငွေ။ရွှေလားငွေလားဆိုတာ တခါထဲသိပြီ။ တတိယအကြိမ်မှာ အဲဒီ(ဂ)အုပ်စု ၃လုံးထဲက ၂လုံးကို ချိန်ခွင်တဖက်စီမှာထည့်ချိန်- ညီနေရင် ကျန်တဲ့၁လုံးကရွှေသို့မဟုတ်ငွေ။ ဒုတိယအကြိမ်ကတည်းက ရွှေလားငွေလားတော့ သိပြီးသားလေ။ မညီရင်- ဒုတိယအကြိမ်ကတည်းက ရွှေလားငွေလားသိပြီးသားမို့ ရွှေဆိုရင် လေးတဲ့ဘက်က ရွှေဂေါ်လီပေါ့။ ငွေဆိုရင် ပေါ့တဲ့ဘက်က ငွေဂေါ်လီပေါ့။
ပထမအကြိမ်ချိန်လို့ ချိန်ခွင်၂ဖက်ကမညီရင် (က)အုပ်စု၎လုံးနဲ့ (ခ)အုပ်စုလေးလုံးထဲမှာ ရွှေသို့မဟုတ်ငွေ ပါသွားပြီ။ (ဂ)အုပ်စု ၄လုံးစလုံးကတော့ သံပဲ။
လေးတဲ့အုပ်စုထဲက ၃လုံးကို ပေါ့တဲ့အုပ်စုဘက်ထည့် – ပေါ့တဲ့အုပ်စုထဲက ၃လုံးကို အောက်ပြန်ချ – (ဂ)အုပ်စုထဲက ၃လုံးကို လေးတဲ့အုပ်စုဘက်ထည့်ပြီး ချိန်ကြည့်။ အခြေအနေ(၃)မျိုးရှိနိုင်တယ်။
-လေးတဲ့ဘက်က ဆက်လေးသေးရင် ( မူလလေးတဲ့အုပ်စုထဲက ကျန်တဲ့၁လုံးနဲ့ မူလပေါ့တဲ့အုပ်စုထဲက ကျန်တဲ့၁လုံး )ထဲကတခုခုဟာ သံမဟုတ်ဘူး။ကျန်တဲ့ ၁၀လုံးက သံ။ နောက်တကြိမ်မှာ သံမှန်းသေချာတဲ့၁လုံးနဲ့ လေးတဲ့အုပ်စုထဲက ကျန်တဲ့၁လုံးကို ချိန်ကြည့်။ တူနေရင် မူလပေါ့တဲ့အုပ်စုကကျန်တဲ့၁လုံးဟာငွေ။ မတူရင် ချိန်ခွင်ပေါ်က မူလလေးတဲ့အုပ်စု ထဲကကျန်တဲ့၁လုံးဟာ ရွှေ။
လေးတဲ့ဘက်က ပေါ့သွားပြီး ပေါ့တဲ့ဘက်က လေးသွားရင် နေရာရွှေ့လိုက်တဲ့ လေးတဲ့ဘက်က၃လုံးထဲမှာ ရွှေ၁လုံးပါ သွားပြီ။ နောက်တကြိမ်မှာ အဲဒီ၃လုံးထဲက ၂လုံးကို ချိန်ခွင်တဖက်ဆီမှာချိန်ကြည့်။ တူနေရင် ကျန်တဲ့၁လုံးက ရွှေ၊ မတူရင် လေးတဲ့ဘက်ကရွှေ။
ချိန်ခွင်၂ဖက်လုံးညီသွားရင် အောက်ကိုချလိုက်တဲ့ ပေါ့တဲ့ဘက်က၃လုံးထဲမှာ ငွေ၁လုံးပါသွားပြီ။
နောက်တကြိမ်မှာ အဲဒီ၃လုံးထဲက၂လုံးကို ချိန်ခွင်တဖက်ဆီမှာချိန်ကြည့်။ တူနေရင် ကျန်တဲ့၁လုံးက ငွေဂေါ်လီ၊ မတူရင် ပေါ့တဲ့ဘက်ကငွေဂေါ်လီ။
ဒါနဲ့ စကားမစပ်… ဒီလို ဥာဏ်စမ်းပဟေဌိတွေထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပိုင် မြန်မာနိုင်ငံက ထွင်ထားတဲ့ဟာမျိုးမရှိဘူးလားဗျ… မြန်မာဆိုဒ်တွေမှာ ရှိသမျှ ဥာဏ်စမ်းတွေ အကုန်လုံး အင်တာနက်ပေါ်မှာ အင်္ဂလိပ်လိုရှိလို့ မေးကြည့်တာပါ… နည်းနည်းပါးပါးတော့ ကွဲတာပေါ့လေ… မြန်မာတွေဆီက သူတို့ကူးယူသွားတာလည်း ဖြစ်နိုင်တာပဲ… ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ့ရိုးရာ မူပိုင် ပြည်တွင်းဖြစ်လေးရှိရင်ကောင်းမယ်လို့ ထင်မိလို့ပါ… သိတဲ့လူများရှိရင် ပြောပြကြပါ… ဗဟုသုတအဖြစ် သိချင်လို့ပါ
ကနဦး ကျနော်ပေးခဲ့အဖြေကိုပဲ ပြန်ယူမယ်ဗျာ…။ မှန်၊ မမှန် (ဘာကြောင့်မှား) ဆိုတာ ပြန်ပြောပါအုံး။။
ငါးလုံးစီခွဲချိန်လို. မညီ ရင် လေးတဲ့ဘက်က ငါးလုံးမှာ ထူးခြားမှုရှိတယ်လို. သတ်မှတ်လို.မရသေးပါဘူး ။ လေးတဲ့ဘက်မှာ ရွှေ မရှိပဲ ပေါ့တဲ့ဘက်မှာ ရှိနေတဲ့ငွေကြောင့် ပုံမှန်သံလုံးတွေက အလေးချိန်ပိုစီးသွားတာလည်းဖြစ်နေနိုင်လို.ပါ။ အဲဒါကြောင့် ငါးလုံးစီခွဲချိန်လို. အလေးချိန်မတူ ရင် ကျွန်တော်တို.ကောက်ချက်ချနိုင်တာက ဖယ်ထားတဲ့နှစ်လုံးဟာ သံလုံးတွေဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့အချက်တစ်ခုပဲရတာပါ။ တစ်ဖက်ကလေးတစ်ဖက်ကပေါ့နေတဲ့ ဂေါ်လီဆယ်လုံးထဲမှာ တစ်ခုခုကတော့ ထူးခြားနေပြီလို.ပဲ ယူဆနိုင်တာပါ။ အဲဒါကြောင့် အဖြေဟာလွဲနေပါတယ်။ ကိုကြောင်ကြီးချိန်တာဟာ ဘာမှန်းမသိသေးတဲ့ ဂေါ်လီတွေကိုချိန်တာပါ၊ လေးတယ်ပေါ့တယ်ဆိုတာဟာ တစ်ဖက်ကလေးရင်ကျန်တဲ့ဘက်ကပေါ့တယ်လို.ဆိုရမှာပါ။ လေးတဲ့ဘက်မှာပဲ ရွှေပါတယ်လို. ယူဆလိုက်ပြီး ကိုကြောင်းကြီးပြောသလိုဆက်ချိန်ကြည့်လို. အားလုံးဟာ အလေးချိန်အတူတူဖြစ်နေရင် ပေါ့တဲ့ဘက်က ငါးလုံးထဲမှာ ငွေပါနေနိုင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင် ပေါ့တဲ့ဘက်က ငါးလုံးထဲကငွေပါတဲ့အလုံးကို ထပ်ရှာရဦးမှာပါ ။ ဒါဆိုရင် ချိန်ခွင်အသုံးပြုခွင့် ၃ ကြိမ်ထက်ပိုသွားပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်မှားနေရတာပါ။
အဟေးဟေး.. ဟုတ်သဗျ။ ကျနော်အဲဒီအချက်ကို စဉ်းစားမိပြီး အဖြေကို ပြန်ရုပ်ခဲ့တာ။ မနက်မိုးလင်းတော့ ညကစဉ်းစားမိတဲ့ အချက်ကို ပြန်ဖော်လို့မရတော့ဘူး။ ဒါနဲ့ ရမလားလို့ လုပ်ကြည့်တာ။ သိပ်တော့ ခေါင်းလိုက်မစားပါနဲ့ဗျာ…။ ရွာသား အချင်းချင်းပဲဟာ။
ရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ဥာဏ်စမ်းပဟေဠိကောင်းတစ်ပုဒ်ထွက်ပေါ်လာဖို.ဆိုတာမလွယ်တော့။ ထွက်ပေါ်လာပြီဆိုတာနဲ့ ၀ါသနာရှင်တွေအချင်းချင်းဖြန့်ဝေတော့တာပါပဲ။အဲလိုဖြန့်ဝေတဲ့အခါမျိုးမှာ ဘယ်သူတီထွင်ခဲ့တယ်။ ဘယ်နေရာကပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို မှတ်သားလေ့မရှိကြပဲ ဥာဏ်စမ်းပုစ္ဆာကိုပဲ မှတ်သားမိနေတတ်ကြတော့ တီထွင်ခဲ့သူကိုမေ့ကျန်သလိုဖြစ်သွားတတ်ကြပါတယ်။ အင်တာနက်ထဲမှာတွေ.ရတဲ့ ဥာဏ်စမ်းပုစ္ဆာတွေမှာ မြန်မာတွေတီထွင်ခဲ့တဲ့ ပုစ္ဆာတွေလည်းပါကောင်းပါနိုင်ပါတယ်။ ဘီလူးသုံးဆယ်နဲ. မင်းသားသုံးပါးလို ဥာဏ်စမ်းမျိုးကတော့ မြန်မာဖြစ်လို. ထင်ရတာပဲဗျ။ အဲဒီပုစ္ဆာက “ဏဘယံ ” ဘေးမရှိဆိုတဲ့စကားပေါ်အခြေခံထားတာဆိုတော့လေ။ နောက်ပြီး ညောင်ပင်ဝန်းဆိုတဲ့ ရွာမှာ ကျွန်တော့်အဘိုးကျောင်းအုပ်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ကျတုန်းက အဲဒီရွာမှာ ကြက်သွန်ဝယ်ကြရင်း အငြင်းအခုန်ဖြစ်ကြပါတယ်။ သူမှန်တယ်ငါမှန်တယ်ငြင်းကြရင်းက ရပ်ကွက်လူကြီးတွေ၊ ကျောင်းက သင်္ချာသင်တဲ့ ဆရာတွေပါ အုပ်အော်သောင်းတင်းဖြစ်ပြီး တော်တော်လေးဖြေရှင်းလိုက်ရတဲ့ပြသနာတစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲဒီပြသနာဟာလည်း တော်တော်ကောင်းတဲ့ ဥာဏ်စမ်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ခက်တာက ကျွန်တော့်အဖိုးကလည်း အဲဒီပုစ္ဆာကိုကောင်းကောင်းမမှတ်မိတော့ဘူးဖြစ်နေလို. တင်ချင်ပေမယ့် မတင်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဒီစာကိုဖတ်မိတဲ့ ညောင်ပင်ဝန်းက တစ်ယောက်ယောက်ကများ မှတ်မိမယ်။ ဒါမှမဟုတ် သိမယ်ဆိုရင် တင်ပေးစေချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်းအချိန်ရတဲ့တစ်နေ.တော့ ညောင်ပင်ဝန်းကိုသွားပြီ ဂဂဏဏ စုံစမ်းပါဦးမယ်။ ရလာခဲ့ရင်တော့ TTCG စိတ်ကြိုက် ပြည်တွင်းဖြစ်ဥာဏ်စမ်းတစ်ပုဒ် ရလာမှာပါ။
ငယ်ငယ်တုန်းကဖတ်ဖူးတယ် ။ ဒါပေမဲ့ သဘောမပေါက်ဘူး။
၃ကြိမ်နဲ့တော့စဉ်းစားလို့မရဘူးဗျ။ ၄ကြိမ်ဆိုရင်တော့ ၂နည်းရှိတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ရွှေ သို့မဟုတ် ငွေကို ရွေးဖို့တကြိမ်ကျန်နေတယ်။
၁။ပထမလေးလုံး စီချိန်မယ်။ အလေးချိန်တူရင် ၈လုံးစလုံး အားလုံးသံလုံးတွေဖြစ်တယ်။
၂။ကျန်လေးလုံးထဲက ၂လုံးကို သိပြီးသား သံလုံး၂လုံးနဲ့ချိန်မယ် ။
၃(က)အချိန်ညီမယ်ဆိုရင် ကျန် ၂လုံးထဲက၁လုံးကို သံလုံးနဲ့ချိန်မယ်။
၃(ခ)အချိန်မညီရင် အဲဒီထဲက ၁လုံးကို သံလုံးနဲ့ချိန်မယ်။
၄လုံးစီချိန်လို့အလေးချိန်မတူရင် – ၄ခါချိန်မှရမယ်ထင်တယ်။
သုံးခါတည်းချိန်ရုံနဲ့ကို ရပါတယ်ဗျ။ xman တောင်ချိန်ပြထားသေးတယ်။ သူ.အဖြေက မှန်ပါတယ်ဗျ။ စဉ်းစားချင်သေးတယ်ဆိုရင် အဖြေကို မဖတ်သေးပဲ ထပ်ပြီး စိတ်ကူးနဲ.ချိန်ကြည့်ပါလား။ တစ်ယောက်တည်းချိန်တာထက်စာရင် ၀ါသနာတူသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ယောက်နဲ. အပြန်အလှန်မေးခွန်းတွေမေးပြီးဖြေကြည့်ပါလားဗျ။ငြင်းလိုက်ခုန်လိုက်နဲ.တော်တော်ပျော်စရာကောင်းတယ်ဗျ။ အတွေ.အကြုံတစ်ခုပြောပြမယ်ဗျာ။ ဦးထုပ်သုံးလုံး ပုစ္ဆာကိုကျွန်တော်တို.အဖိုးက ပြောပြတာပါ။ သူအလှူ လုပ်တုန်းမှာ ညီအစ်ကိုတွေစုံနေတာနဲ့ (ကျွန်တော့်အဖိုးမှာ ညီအစ်ကို ၅ယေက်ရှိပါတယ်) ဦးထုပ်ပုစ္ဆာကို ချပြလိုက်တာ။ ညနှစ်နာရီ သုံးနာရီလောက်ထိ ညီအစ်ကိုတွေငြင်းခုန်နေကြတာ။ ရပ်ကွက်လူကြီးတွေက ရန်ဖြစ်နေတယ်ထင်လို. လာတားယူရတဲ့အထိပဲ။ ကျွန်တော်ဒီလိုပြောလို. ဒီပုစ္ဆာကို ကျွန်တော့်အဖိုးတီထွင်ခဲ့တယ်လို. မဆိုလိုပါဘူး။ ကျွန်တော့်အဖိုးက ကျွန်တော်တို.ကို ပြန်ပြောပြလို. သိတဲ့အကြောင်းပဲပြောချင်တာပါ။ သူလည်းဒီပုစ္ဆာကို ဘယ်ကရလဲတော့ မသိဘူးဗျ။
မှန်တာတွေကို Choose to right answer လုပ်ပေးပါလား။